Tokony ho tamin’ny 06 ora sy sasany maraina no nitrangan’izany ka nihiaka niantso vonjeo ilay Ramatoa. Somary navesatra anefa ity farany sady lavabe ka tsy zakan’izy telo mirahalahy. Niara-nianjera izy ireo ka voatsindrin’ilay Ramatoa tao ambaniny avokoa ny entana sy ny poketra. Niezaka nisava ihany ireo mpanendaka na dia efa nanatona aza ireo olona namonjy ilay Rtoa izay marihina fa tsy tahotra tsy henatra intsony. Taorian’izay dia lasa niditra namakivaky ireo elakela-trano etsy Ambodin’Isotry ireo mpanendaka ka tsy nisy tratra na dia iray aza. Niray hina namonjy ity renim-pianakaviana ity avokoa omaly maraina hatramin’ireo mpandeha tany anaty taksibe, antony nampatahotra ireo mpanendaka.